Izixhobo zeplastikhi, uMngundo weplastiki, Inaliti yePlastiki-Chapman
Wamkelekile kwinkampani yoMenzi weChapman, yasekwa ngonyaka ka-2008. Sineziqinisekiso ze-SGS kunye ne-ISO 9001 yolawulo lomgangatho.
Sigxila kuphuhliso lweplastikhi; udonga olucekeceke kunye noludongeni, ukunyamezelana okuqinileyo, ukubumba kwe-LSR, ukukhula kwemveliso kunye nokuhlangana. Sikhonza inani leemarike kubandakanya iMizi-mveliso, iZithuthi, ezonyango, ezombane, ezokhuselo, ezothutho kunye noMthengi. Sisoloko sidlula kulindelo lwabathengi bethu ngokuxhobisa bonke abo sinxulumana nabo kunye nokwenza inkcubeko eyamkela ukuphucuka, ukuvelisa okungumtya kunye nentsebenziswano yokubonelela ngeenkonzo ukuqinisekisa ixabiso liphezulu kubathengi bethu.
5-30 Iintsuku Ixesha lokukhokhela
Iinyanga ezingama-300-500K Umthamo wenaliti
Iiseti / Iinyanga ezingama-35-50 Amandla oMngundo
Plastic Ikubumbe & Inaliti
Izixhobo zethu zokubumba zibonelela ngokuguquguquka ekusebenzeni kwazo zonke iintlobo zemathiriyeli ye-thermoplastic. Sigxininisa kwimveliso yokuvelisa kuluhlu olubanzi lwezicelo kunye nakumashishini athile kubandakanya ezonyango, izixhobo ze-elektroniki, izihlanganisi, ezemizi-mveliso, ezokhuselo, ezothutho kunye nomthengi.
Ngezityalo ezine kunye ne-50 + yenaliti ukusuka kwi-60 ukuya kwi-500 yeetoni, sinokuvelisa izinto ezincinci njenge-ounces ezingama-75 ukuya kwiindawo ezivaliweyo ezinkulu njengee-ounces ezingama-80. Sinokukunceda ekwenzeni ngcono kunye nokuphucula uyilo lwakho lweemveliso ukufezekisa ezona ziphumo zibalaseleyo zokuhlangabezana neemfuno zecandelo lakho.
Imveliso edityanisiweyo ethe nkqo
Yangamafu kwaye Thin Wall Ukubumbela
Ukuhombisa kunye noVavanyo
Dibana nayo yonke eyakho
Imisebenzi yethu yangaphakathi ngaphakathi isusa abathengisi bangaphandle, isindisa ixesha elininzi lokukhokela kunye neendleko zazo zonke iimveliso zakho.
Imisebenzi eSekondari eNdlwini:
Icandelo lokujoyina: Ukuncamathela kwe-Adhesive, Ukuma kobushushu
Ukuprintwa kwePad kunye nokuhombisa
Iindibano zoMatshini kunye neeMishini zoMbane kunye noVavanyo